Laser Tattoo Removal - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Laser စကျဖွငျ့ tattoo ဖကျြခွငျး
Tattoo ထိုးခွငျး အနုပညာက ခတျေအဆကျဆကျ လူငယျတှရေော လူကွီးတှနေဲ့ပါ အကြှမျးတဈဝငျ ရှိပွီးသားအရာတဈခုပါအရငျတုနျးက စကားပုံထဲမှာ ဖကျြရ ပွငျရခကျတယျပွောခဲ့တဲ့ tattoo ကို အခုခတျေမှာတော့ laser စကျကို အသုံးပွုပွီး ဖကျြလို့ရနပွေီ ဖွဈတဲ့အတှကျ laser tattoo removal အကွောငျးကို ပွောပွပေးခငျြပါတယျတဈခြို့က tattoo ထိုးပွီးမှ မကွိုကျတော့တာတှေ, ထိုးပွီးသား tattoo ရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခြို့ကို ဖကျြခငျြတာတှေ ပွငျခငျြတာတှကေို laser စကျအမြိုးမြိုးနဲ့ ဖကျြလို့ရနပေါပွီ
Laser Tattoo Removal ဆိုတာဘာလဲ?
Laser စကျရဲ့ အလငျးတနျးလေးေhttp://128.199.224.56/wp-admin/admin.php?page=avadaတှက tattoo ရဲ့ဆေးရောငျ လေးတှကေို အစိတျအပိုငျး သေးသေးလေးတှေ ဖွဈအောငျ ဖွိုခှဲခွငျး ဖွဈပါတယျ ပွိုကှဲသှားတဲ့ tattoo ဆေးရောငျခယျြလေးတှကေို ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ကိုယျခံအားစနဈကနေ ခဖြေကျြပေးပွီး အခြိနျကွာလာတာနဲ့ အမြှ tattoo ရဲ့ ဆေးရောငျတှေ ထိုးထားတဲ့နရောကနေ ပြောကျကှယျသှားအောငျ ကုသခွငျးဖွဈပါတယျ
Tattoo ဖကျြဖို့ အခြိနျ ဘယျလောကျကွာလဲ?
Tattoo ထိုးထားတဲ့ နရောနဲ့ ဆေးရောငျ အမြိုးအစားပျေါမူတညျပွီး ကွာမွငျ့ခြိနျပွောငျးလဲနိုငျပါတယျဆေးရောငျ အမဲနဲ့ အပွာရောငျတို့က မွနျမွနျပြောကျပွီးတော့ ဆေးရောငျအဖြော့တှကေ ကုသဖို့ ပိုကွာပါတယျLaser တဈခါပွဈပွီ6းပတျကနေ ၈ ပတျထိ စောငျ့ပွီးမှ နောကျတဈကွိမျ ပွနျပွဈဖို့ လိုအပျပါတယျ
ဆေးရောငျ အမြိုးအစားနဲ့ နရော ပျေါမူတညျပွီး စုစုပေါငျး laser ပွဈရနျ ၄ ကွိမျမှ ၁၂ ကွိမျထိ လိုအပျနိုငျပါတယျထိုးထားတာ ကွာနတေဲ့ tattoo တှကေ ဖကျြရလှယျပွီးတော့ လတျတလောထိုးထားတဲ့ tattoo တှကေ ဖကျြရတာ ပိုကွာတတျပါတယျ
Laser နဲ့ tattoo ဖကျြရငျ နာလား?
အသားမှာ စှဲနတေဲ့ ဆေးရောငျကို ဖကျြတာဖွဈတဲ့အတှကျ နဲနဲတော့ နာပါတယျတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျနာကငျြမှုကို ခံနိုငျရညျအားမတူတဲ့အတှကျ နာကငျြမှုလဲ မတူပါဘူးဥပမာအားဖွငျ့ သားရပေငျနဲ့ အပွဈခံရသလိုမြိုးတော့ နာကငျြနိုငျပါတယျ
ကြှမျးကငျြတဲ့ အလှအပဆိုငျရာ ဆရာဝနျကို သခြောရှေးခယျြဖို့ လိုအပျပါတယျကုသမှုခံယူနစေဉျအတှငျး ဆရာဝနျရှငျးပွတဲ့အတိုငျး လိုကျနာဖို့လဲ လိုအပျပါတယျlaser ပွဈပွီးပွီးခငျြး ပူခွငျး, နီခွငျး, နာခွငျး, သှေးခွဥေခွငျး, အရကွေညျဖု ထှကျခွငျးမြား ခံစားရနိုငျပါတယျhypopigmentation နဲ့hyperpigmentation လို့ချေါတဲ့ ဘေးပတျလညျက အသားထကျ ပိုဖွူတာတှေ ပိုမဲတာတှလေဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ ( ပုံမှနျအသားအရောငျ ပွနျရဖို့ ၆လမှ ၁နှဈ ကွာနိုငျပါတယျ)
Laser ပွဈထားတဲ့နရောကို tattoo ပွနျထိုးလို့ရလား?
tattoo ဆေးရောငျ ကုနျသှားရငျတော့ အဲ့ဒီနရောကိုပဲ tattoo နောကျတဈကွိမျပွနျထိုးလို့ရပါတယျLaser ပွဈပွီး သတိပွုရမယျ့အခကျြလေးကတော့ laser ပွဈထားတဲ့နရောကို အပွငျထှကျပွီဆိုတာနဲ့ နလေောငျကာ cream လေးအမွဲလိမျးပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ အားလုံး ကနျြးမာပြျောရှငျပွီး ကွညျလငျလှပတဲ့ အသားအရလေေး ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ
Laser စက်ဖြင့် tattoo ဖျက်ခြင်း
Tattoo ထိုးခြင်း အနုပညာက ခေတ်အဆက်ဆက် လူငယ်တွေရော လူကြီးတွေနဲ့ပါ အကျွမ်းတစ်ဝင် ရှိပြီးသားအရာတစ်ခုပါအရင်တုန်းက စကားပုံထဲမှာ ဖျက်ရ ပြင်ရခက်တယ်ပြောခဲ့တဲ့ tattoo ကို အခုခေတ်မှာတော့ laser စက်ကို အသုံးပြုပြီး ဖျက်လို့ရနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် laser tattoo removal အကြောင်းကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်တစ်ချို့က tattoo ထိုးပြီးမှ မကြိုက်တော့တာတွေ, ထိုးပြီးသား tattoo ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကို ဖျက်ချင်တာတွေ ပြင်ချင်တာတွေကို laser စက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖျက်လို့ရနေပါပြီ
Laser စက်ရဲ့ အလင်းတန်းလေးေhttp://128.199.224.56/wp-admin/admin.php?page=avadaတွက tattoo ရဲ့ဆေးရောင် လေးတွေကို အစိတ်အပိုင်း သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင် ဖြိုခွဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ပြိုကွဲသွားတဲ့ tattoo ဆေးရောင်ချယ်လေးတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကနေ ချေဖျက်ပေးပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ tattoo ရဲ့ ဆေးရောင်တွေ ထိုးထားတဲ့နေရာကနေ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် ကုသခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Tattoo ဖျက်ဖို့ အချိန် ဘယ်လောက်ကြာလဲ?
Tattoo ထိုးထားတဲ့ နေရာနဲ့ ဆေးရောင် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ကြာမြင့်ချိန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဆေးရောင် အမဲနဲ့ အပြာရောင်တို့က မြန်မြန်ပျောက်ပြီးတော့ ဆေးရောင်အဖျော့တွေက ကုသဖို့ ပိုကြာပါတယ်Laser တစ်ခါပြစ်ပြီ6းပတ်ကနေ ၈ ပတ်ထိ စောင့်ပြီးမှ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
ဆေးရောင် အမျိုးအစားနဲ့ နေရာ ပေါ်မူတည်ပြီး စုစုပေါင်း laser ပြစ်ရန် ၄ ကြိမ်မှ ၁၂ ကြိမ်ထိ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်ထိုးထားတာ ကြာနေတဲ့ tattoo တွေက ဖျက်ရလွယ်ပြီးတော့ လတ်တလောထိုးထားတဲ့ tattoo တွေက ဖျက်ရတာ ပိုကြာတတ်ပါတယ်
Laser နဲ့ tattoo ဖျက်ရင် နာလား?
အသားမှာ စွဲနေတဲ့ ဆေးရောင်ကို ဖျက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် နဲနဲတော့ နာပါတယ်တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နာကျင်မှုကို ခံနိုင်ရည်အားမတူတဲ့အတွက် နာကျင်မှုလဲ မတူပါဘူးဥပမာအားဖြင့် သားရေပင်နဲ့ အပြစ်ခံရသလိုမျိုးတော့ နာကျင်နိုင်ပါတယ်
ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကို သေချာရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်း ဆရာဝန်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်း လိုက်နာဖို့လဲ လိုအပ်ပါတယ်laser ပြစ်ပြီးပြီးချင်း ပူခြင်း, နီခြင်း, နာခြင်း, သွေးခြေဥခြင်း, အရေကြည်ဖု ထွက်ခြင်းများ ခံစားရနိုင်ပါတယ်hypopigmentation နဲ့hyperpigmentation လို့ခေါ်တဲ့ ဘေးပတ်လည်က အသားထက် ပိုဖြူတာတွေ ပိုမဲတာတွေလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ( ပုံမှန်အသားအရောင် ပြန်ရဖို့ ၆လမှ ၁နှစ် ကြာနိုင်ပါတယ်)
Laser ပြစ်ထားတဲ့နေရာကို tattoo ပြန်ထိုးလို့ရလား?
tattoo ဆေးရောင် ကုန်သွားရင်တော့ အဲ့ဒီနေရာကိုပဲ tattoo နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ထိုးလို့ရပါတယ်Laser ပြစ်ပြီး သတိပြုရမယ့်အချက်လေးကတော့ laser ပြစ်ထားတဲ့နေရာကို အပြင်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ နေလောင်ကာ cream လေးအမြဲလိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ကြည်လင်လှပတဲ့ အသားအရေလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ